Widhwidh:Wafdi Somaliland ah oo uu Siilaanyo soo diray ayaa maanta ku soo beegan | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > ALL DARWIISH NEWS, Somaliland, WARARKA	> Widhwidh:Wafdi Somaliland ah oo uu Siilaanyo soo diray ayaa maanta ku soo beegan
Widhwidh:Wafdi Somaliland ah oo uu Siilaanyo soo diray ayaa maanta ku soo beegan
Monday, November 1, 2010 Laaska News
Lasanod(LAASKA NEWS) November 1,2010.
Wararka laga helayo magaalada Laascaanood ee magaala madaxda Gobolka Sool ayaa sheegaya in wafdi heer sare ah oo Somaliland ah kana kooban Wasiiro,xildhibaano labada Gole ah,odayaal iyo saraakiil aykasoo ambabaxeen magaalada Hargeysa kuna soo jeedaan magaalada Widhwidh oo u dhaxaysa magaalada Laascaanood iyo magaalada Buuhoodle,waxaana baryahan ka socday magaalada Widhwidh diyaar garow iyo qabanqaabo sidii loo qaabili lahaa wafdigaas
Waxaa halkaa ku sugan Garaad Abshir Saalax.
Waxaa kale oo lasoo sheegayaa inay maanta ay gaadhaan Widhwidh,wa
xaana wafdigaas la socda Wasiiro iyo xildhibaano kasoo jeeda reer Sool.
Madaxweynaha Somaliland ayaa ku socda siyaasad ka duwan tii madaxdii hore ee Somaliland lagu yaqaanay,taasoo ah in uu ergo u diro hab ah marba deegaan.
Waxa uu hore ergo ugu diray deegaanka Xadhadhanka,haddana waa Widhwidh oo ah meel si daran maamulka Somaliland looga soo hor jeeday.
Haddii uu Siilaanyo ku guulaysto shirka Widhwidh,waxay dhabar jab ku noqonaysaa kooxihii kasoo horjeeday ee ay Garaadada intooda badani raacsanaayeen.
Waxaana ay umuuqataa in uu beel beel ku wadi doono,waxaa kaloo muuqata in kalsoonidii ay kooxaha kasoo horjeeda Somaliland ay u hayeen Puntland ay sii yaraanayso,mar haddii ay weyday rag badan oo miisaan iyo karaama ku lahaa Sool,soona celin kari weyday Sool.
Waxaan ilaa hadda cadayn in shirkaas ay ka qayb gali doono Isimo kale,marka laga reebo Garaad Abshir oo isaga deegaanka marti loogu yahay,waxaa la filayaa inuu isna soo gaadho Garaad Cabdulaahi Soofe.
Si kastaba ha ahaatee Siilaanyo siyaasadiisa cusub ayaa waxay tahay qayb walba heshiis gaar ah, inkastoo oo Beeshu ay horayba ukala qaybsanayd oo aanay jirin meel loogu hagaago iyo waxay isku raacsan yihiin.
Waxaan Isimada la kulmi doono wafdigaas u soo jeedinayaa in la kala qorto dhulka lakala leeyahay iyo awood qaybsi waa hadaad heshiis lagalaysaan.
Tags: Buuhoodle, laascaanood, Muqdisho, Somaliland, ssc, wafdi, Warka, widhwidh
Raysal Wasaare Farmaajo oo la dhaariyay-Sawirro Somalia:Raysal Wasaaraha cusub oo waraysi gaar ah la yeelatay VOA,Waraysi Gud.Baarlamaanka oo Xasaasi ah,iyo Xubno kale Dhagayso